Dhiiroota ofitti amanamummaa isaanii dabaluuf qunxurroo guddifatan - | - OBN
Dhiiroota ofitti amanamummaa isaanii dabaluuf qunxurroo guddifatan
OBN Onk.22, 2011- Dhiironni lama qaama saalaa isaanii maalif akka furdifachuu/guddifachuu barbaadan BBCtti himan.
Dargaggeessi ganna 27 Abdul Hasan jedhamu, maamilummaadhaan warreen qaama saalaa furdisan biratti deddeebi'aa jira. Kana gochuun isaa ammoo jaalalleesaa biratti fudhatama qabu dabaluuf akka tahe hime.
Dargaggeessi kuni jaalalleesaa kana waliin waggoota saddeet waliin turus yeroo hunda waa'ee qunnamtii saalaatiin jaalalleessaa kana gammachiisuu yaada.
Boodarra qaama saalaa isaa guddifatee jaalalleesaas guddaa ajaa'ibsiifatte.
Ogeessonni kunneen qaama saalaa dhiiraa kan guddisan dhangala'aa 'hyaluronic acid' kan tiishuu haphii qaama irratti lilmoodhaan waraannamuuni.
Gochi kuni adeemsa baqaqsanii yaaluu kan hin qabne yoo ta'u kilinikoota keessatti sa'aatiiwwan muraasa keessatti xumurama.
Baasiin si'a tokko guddifachuuf gaafatamus paawundii 3,000 ykn Birrii Itoophiyaa 100,000 ol kan tahudha.
Hamma qabiyyee asiidii lilmoodhaan kennameerratti hundaa'uunis qaama saalaa dhiirotaa seentimeetira tokkoo hanga lamaatti furdinasaa dabaluu kan danda'uudha.
Lilmoon si'a tokko fudhatames ji'oota 18'f kan tajaajiluudha.
Waldaa baqaqsanii yaaluu yuurolojikaala Biriirten irraa Mr. Asif Munner gochi kuni dammaqiinsa qaamni saalaa dhiirotaa walqunnamtiii saalaa raawwachuuf qaburratti jijjirama guddaa kan hin finnedha jedhu.
Haa ta'u malee adeemsa keessa adeemsa walqunnamtii saalaa raawwachuu irratti rakkoo walxaxaa ta'e fiduu mala jedhu.
Haa ta'u malee erga tajaajila kana fudhachuu eegalee ofitti amanamuummaankoo dabaleeras jedha.
UK keessatti dhaabbileen baqaqsanii yaaluu kan fayyummaa qaama saalaa dhiirotaa irratti hojjetaan sagantaa 'Victoria Derbyshire' irratti yaada kennaniin lakkoofi dhiirota qaama saalaa isaanii guddisuuf dhufanii haalan dabalaa akka jiru himan.
Waggoota sadiin dura baayyinni dhiirota tajaajila kanaaf dhufanii ji'atti 130 ture amma gara 700tti guddateera.
Ogeessonii fayyaa kunneen akka jedhanitti dhiironni hedduun mala aadaatiin qaama saalaa isaanii guddifachuuf wayita yaalan rakkoolee walxaxaa keessa akka seenan himu.
Yeroo akkasiitti yaala baqaqsanii yaaluu akka kennaniifi yeroo rakkinichi humnaa oltahu ammoo asiidicha keessaa dhabamsiisuudhaa hanga foon qaama saalaa dhiirotaa irra jiru guutummaan irraa kaasuun qaama biraarraa fuudhuun itti suphuus akka hojjetan himan ogeessonni.
13958 Views 11/1/18